Muvhuro 19 Kubvumbi 2021
Makeup Mubatsiri Iyi dhizaini inoongorora fananidzo ye eyelash. Mugadziri anoona eyelashing ndeyekutsvaga kwekutarisira kwega. Iye anogadzira eyelash kumira sechiratidzo chehupenyu kana chidiki diki chekuita. Ichi chinomiririra kuratidzira kunoyeuchidza mumangwanani kana usati warara, nekuisa eyelashes kwenguva pfupi isati kana yaiswa. Kumira eyelash inzira yekubata nemusoro izvo chimwe chinhu chidiki chakasimbisa kune wega zuva nezuva mafaro.
Theme Kuisirwa Ichi chigadzirwa chinobata nenyaya inoratidzwa nemamojimendi. Iyi tema theme yakarongedzwa neyakaomeserwa wega dhizaini yekubatanidza matanhatu kana anopfuura makerubhi kune yakakwira-yakakwenenzverwa unit mumatanho matatu eparendicular. Iyo yemahara fomu yekushongedza nemabheji inoita kuti hukama hubatanidze nevanhu vari pakati pekutamba vanhu. Iko kurongeka kwemakomba madiki kunogadzira chimiro chepekugara pacho nenyaya ine mutsara zvikamu.
Mugovera 17 Kubvumbi 2021
Tafura Yetafura Ichi Chiedza chinobata basa rinoshanda kuperekedza vanhu munzvimbo yekushanda kubva mangwanani kusvika husiku. Yakagadzirwa nevanhu vanoshanda nharaunda mupfungwa. Iyo waya inogona kubatana necomputer yeparutivi kana kubhengi remagetsi. Chimiro chemwedzi chakagadzirwa nematunhu matatu echitenderedhiti semucherechedzo wekukwira kubva kumufananidzo wepasi wakagadzirwa nesimbi isina chinhu. Maitiro ekunze kwemwedzi anoyeuchidza gwara rekutora mupurojekiti yemudhara. Iko kurongedza kunoratidzika sedanda mukujeka kwezuva uye chishandiso chechiedza chinonyaradza nguva yekushanda usiku.
Chishanu 16 Kubvumbi 2021
Mwenje Louvre mwenje mwenje wekudyidzana tafura yakafuridzirwa neyechirimo zhizha zhizha iro rinopfuura nyore kubva kuvhara rakavharwa kuburikidza neLouvres. Iyo inosanganisirwa nemhete makumi maviri, 6 ye cork uye 14 yePlexiglas, ino shandura odhi nenzira inotamba kuitira kuti ishandure infusion, huwandu uye hwekupedzisira hwakajeka hwechiedza maererano nezvinodiwa nevashandisi uye zvavanoda. Chiedza chinopfuura nepakati pechinhu uye chinoita kukanganiswa, saka hapana mimvuri inozviratidza pachako kana panzvimbo yakapoteredza. Mhete dzakakomberedzwa dzakasiyana dzinopa mukana wekusanganiswa kusingaperi, kuchengetedzwa kwemaitiro uye kutonga kwese kwechiedza.
China 15 Kubvumbi 2021
Dhizaini Mbatya NS GAIA ishoko remazuva ano revakadzi rinobva kuNew Delhi iro rine hunyanzvi mune hwakagadzirwa uye nemachira machira. Iyo mhando yakakura yekushongedza kugadzirwa kwepfungwa uye zvinhu zvese kumusoro cycling nekudzokorora. Kukosha kwechinhu ichi kunoratidzwa mune dzinodaidza mbiru, iyo 'N' uye 'S' mu NS GAIA yakamira for Natural uye Sustainability. Maitiro eNS GAIA anoti "zvishoma zvanyanya". Chitaura chinotora chikamu chinoshanda mukufamba zvishoma kwefashoni nekuona kuti zvemagariro zvine mashoma.
Musanganiswa Wekushandiswa Ekuvaka
Chitatu 14 Kubvumbi 2021
Musanganiswa Wekushandiswa Ekuvaka Inowanikwa mune yeguta renhoroondo yeXi'an, pakati penzvimbo yebhizinesi neRwizi rweTaoHuaTan, chirongwa ichi hachingori kungobatanidza zvekare neazvino asi nemadhorobha nemasikirwo. Yakafuridzirwa nePeach rinobuda maruva Chinese Chinese, iyo purojekiti inopa paradisiac yekugara uye yekushanda nzvimbo nekupa hukama hwepedyo nemasikirwo. Mune tsika yeChinese, uzivi hwemvura yemakomo (Shan Shui) inobata zvinoreva hukama huripo pakati pevanhu uye zvisikwa, nekudaro kuburikidza nekushandisa mukana wemvura ine nzvimbo yenzvimbo iyi, chirongwa ichi chinopa nzvimbo dzinoratidza Shan Shui uzivi muguta.
calendar 2013 “Rocking Chair” Kalendari Chishanu 18 Chikumi
calendar 2013 “Farm” Kalendari China 17 Chikumi
calendar 2013 “Safari” Kalendari Chitatu 16 Chikumi
Makeup Mubatsiri Theme Kuisirwa Tafura Yetafura Mwenje Dhizaini Mbatya Musanganiswa Wekushandiswa Ekuvaka